75W Ebube Motion Mgbaba nke Mgbaba China Manufacturer
Nkọwa:Ebube Mgbazi Mgbaba ụgbọala Garage,Oghere uhie na-adọba ụgbọala,Ebe a na-edebe ụgbọ oloko echekwa
Home > Ngwaahịa > Ọkụ ọkụ na-acha ọkụ ọkụ > 60w Na-ekpuchi Ìhè > 75W Ebube Motion Mgbaba nke Mgbaba
Onye ọ bụla na- adọba ụgbọala na-ekpuchi ihe ngosi abịa na onye na-akwọ ụgbọ ala (DOB) nke na-egbochi njedebe nke nsonaazụ ọkụ dị iche iche iji nye ezigbo ọkụ ọkụ na 9000 lumens, ya na 120 lm / W nke njedebe dị elu na arụmọrụ na-adịte aka. A na-agbazi ọkwa nke ọ bụla dị na Garage ụgbọ oloko na-echekwa IP65 ka o guzosie ike megide ndị siri ike n'èzí wee chekwaa n'ájá ma ọ bụ mmiri na-eji kwa ụbọchị. Na oge 50,000 dị egwu nke ndụ gị niile, ọ gaghị adị mkpa ka ị gbanwee ebe ị na- echekwa ụgbọ ologbo gị nke dị na iri afọ anọ na-esote!
Enweghị mgbakwunye na-enweghị ihe ọ bụla nwere ìhè ime ụlọ n'èzí nke nwere ike ịtọlite ​​n'ime usoro dị mfe ole na ole! Naanị ịgbaso ntuziaka nchịkọta iji kpoo efere elu ugwu ahụ dị n'elu ụlọ, jikọọ wiwi na azụ nke ihe mkpuchi ọkụ na-acha ọkụ ọkụ ma gbanye ntanye ọkụ na efere ahụ ma emechaa gị!
Ngosipụta anya na reflector n'ime na-enye ohere maka ojiji ojiji doro anya, na-enweghị ọdịda nke àgwà. Mmiri dị ala a bụ ezigbo ìhè ọkụ nke mpụga maka ebe obibi, azụmahịa, na ọkụ ọkụ ụlọ ọrụ, ọdụ gas, ụgbọala, ụlọ nkwakọba ihe, ebe ụgbọala na-adọba ụgbọala, carport, nnukwu ime ụlọ na n'èzí, na ndị ọzọ.
Ebube Mgbazi Mgbaba ụgbọala Garage Oghere uhie na-adọba ụgbọala Ebe a na-edebe ụgbọ oloko echekwa Ebe nchekwa ụgbọala Garage Mgbagha nke Mgbaba ụgbọala na-echekwa Ebube ụgbọala na-adọba ụgbọala Ebe a na-adọba ụgbọala ntanetị Ebube Ogwe Uhie Na-adọba ụgbọala